Lipstick Tube & Lip Gloss Tube Vatengesi uye Fekitori | China Lipstick Tube & Lip Gloss Tube Vagadziri
Girazi anonhuwira bhodhoro
Chipikiri Bhodhoro rePoland
Bhodhoro reMafuta reEssentail
Cap For Perfume Bhodhoro
Cap Yechipikiri Chipolishi Bhodhoro & Brush
Tsika yakaitwa 50g chando kirimu ...
Pombi yakapusa yezvinonhuwira ...
Factory tsika hwokusanyara surly ...
Wholesale essentail mafuta bot ...
Mavara echinyakare chipikiri pol ...
Kana lipstick chubhu uye miromo kubwinya chubhu ndizvo zvauri kutsvaga saka iwe uri kurudyi nzvimbo. PaNantong Global Packaging Zvigadzirwa Co, Ltd. isu, pano tinokupa iwe hombe muunganidzwa wemachubhu akanaka ayo anogona kushandiswa kuputira yemiromo uye miromo gloss.
Yakakura nhamba yemiromo machubhu uye miromo gloss machubhu mune akasiyana zvinhu, senge ABS, PP, PS, AS, PETG, girazi uye aluminium. Zvinodiwa neMutengi nezvehukuru, kugona, mavara, zvigadzirwa uye zvigadzirwa zvinogamuchirwa. Surface tekinoroji inosanganisira kutsikisa, electroplating, steaming, laser engra, inlay, nezvimwewo Kuwedzeredza kwealuminium pamusoro yekurapa maitiro. Graphic kudhinda ine skrini yekudhinda, kudhinda, kudhinda kwepad, kupisa kupisa kudhinda, nezvimwe. Mapepa mapepa, kudhinda kana epurasitiki mapepa anowanikwa zvakare.
Isu tine yakasimba kudzora mhando kana uchigadzira. Professional timu basa kubva dhizaini, kuvandudza, kugadzira, kuunganidza, kurongedza uye kutumira. Mushure mekutengesa sevhisi, kana paine chero dambudziko nezve mhando, isu tinokupa iwe kutsiva kweakaremara huwandu. Samples isina yakatarwa logo yemahara, kana iwe uchigona kugamuchira iyo mitoro inounganidzwa. Kana iwe uchida neyakagadziriswa logo, isu tinobhadharisa mutengo wevashandi neingi inki. Zvakare kutakura kuchave kuri kuaccount yako.
Isu tinobata mutemo we "mutengi kutanga, mhando yekutanga" kugutsa vatengi 'akawanda anodikanwa. Sevatengesi vezvakawanda uye vanogadzira lipstick chubhu uye miromo girazi chubhu, unogona kuwana mutengo wakanakisa unowanikwa mumusika kubva kuNTGP. Zvese izvo iwe zvaunofanirwa kuita kuisa kuwanda kuraira nesu izvozvi pasina kumwe kuzeza. Kubata kwakanaka kwekutema uye kunoshamisa dhizaini kunogona kuwedzera kutaridzika kune ako machubhu uye kuwedzera kutengesa kwako.
Zano diki, kana uchingori nesmidgen yemiromo yakasara muhubhu, isanganise ne petroleum jelly uye shandisa semuromo kubwinya.
Nyowani dhizaini isina chinhu bullet chimiro lipstick chubhu
Hot chimiro lipstick chubhu, lipstick bhodhoro kurongedza zvinhu
Lipstick chubhu mudziyo unodikanwa tsika yekuzora kurongedza inopisa kutengesa zvigadzirwa
Square isina chinhu yakagadziriswa simbi mavara muromo wemuti chubhu
Yakasarudzika vara rekushongedza kurongedza mini lipstick chubhu mudziyo
Yakaderera mutengo lipstick chubhu kurongedza epurasitiki isina muromo bharisamu mudziyo
Yakakwira-kumagumo yakashongedzwa yakagadziriswa isina lipgloss lip gloss kurongedza
Kupisa kutengesa tsika isina chinhu yakajeka lipgloss chubhu midziyo ine brashi
Yakachipa yakapusa dhizaina tsika epurasitiki cosmetic isina lipgloss chubhu
Nyowani tsika isina chinhu epurasitiki muromo gloss chubhu kurongedza nebrush yekushandisa
Round yakajeka tsika isina lipgloss kesi kurongedza
Bvisa pachena yegoridhe isina chinhu tsika yemvura lipstick machubhu kurongedza
International department rekutengesa maneja: Jerry Ju
Runhare:+86 513 82828465